Atletico Madrid oo u soo baxday finalka Spanish Super Cup kaddib markii guul cajiib ah ka gaartay Barcelona… +SAWIRRO – Gool FM
(Saudi Arabia) 09 Jan 2020. Atletico Madrid ayaa guul cajiib ah kaga gaartay kooxda Barcelona kulanka wareega afar dhamaadka ee koobka Spanish Super Cup, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-3, waxay kulanka finalka balan kaga sameysteen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Real Madrid.
Daqiiqadii 46-aad kooxda Atletico Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 0-1 ka dhigay Koke, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Angel Correa.
Laakiin daqiiqadii 51-aad kooxda Barcelona ayaa heshay goolka barbaraha, waxaana ciyaarta 1-1 ka dhigay Lionel Messi, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Luis Suarez.
Daqiiqadii 62-aad Barcelona ayaa markeeda hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 2-1 ka dhigay Antoine Griezmann.
Daqiiqadii 81-aad kooxda Atletico Madrid ayaa heshay rigoore ama gool ku laad waxaana ciyaarta 2-2 ka dhigay weeraryahanka reer Spain ee Alvaro Morata.
Laakiin daqiiqadii 86-aad ayeey sheeko isbadeshay kaddib markii ay kooxda Atletico Madrid markale la wareegtay hoggaaminta ciyaarta waxaana 2-3 Angel Correa, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Alvaro Morata.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-3 ay ku adkaatay Atletico Madrid, wiilasha tababare Diego Simeone ayaa waxay sidaas balan kaga sameysteen kooxda Real Madrid finalka koobka Spanish Super Cup oo ay wada ciyaari doonaan Axada soo socota.
Muxuu ka yiri Lionel Messi guuldarradii soo laabashada aheyd ay xalay kala kulmeen kooxda Atletico Madrid?